Nanendry GM avy any Belzika i Hilton Myanmar
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nanendry GM avy any Belzika i Hilton Myanmar
GM vaovao ho an'i Hilton Nay Pyi Taw, Hilton Ngapali Resort & Spa ary Hilton Mandalay. Hilton dia nanambara ny fanendrena an'i Veronique Sirault ho Cluster General Manager ny hotely ao Myanmar, nanomboka ny 26 Novambra 2018
Hilton dia nanambara ny fanendrena an'i Veronique Sirault ho Cluster General Manager ny trano fandraisam-bahiny ao Myanmar, nanomboka ny 26 Novambra 2018. Nandritra ny 17 taona niainany teo ambany fehikibony, Veronique dia matihanina mandray vahiny izay tompon'andraikitra amin'ny fitomboan'ny fananana telo an'i Hilton ao Myanmar: Hilton Nay Pyi Taw, Hilton Ngapali Resort & Spa ary Hilton Mandalay.
“Faly izahay mandray an'i Veronique Sirault amin'ny ekipan'i Hilton sy any Myanmar. Izy dia matihanina nahomby tamin'ny dia manan-karena sy mahatalanjona eo amin'ny sehatry ny fitsangatsanganana sy ny fandraisam-bahiny. Faly izahay fa izy no miahy ny asanay ary manohy fahombiazana eto Myanmar, ”hoy i Paul Hutton, filoha lefitra, opérasiona, South East Asia, Hilton.
Veronique dia hanara-maso ny asan'ireo hotely telo an'ny Hilton ao amin'ny firenena, ary koa hanome fanohanana sy fanaraha-maso ny ivon-toeram-piofanana momba ny asa tanana any Hilton any Nay Pyi Taw. Raha naneho hevitra momba ilay fanendrena dia nilaza izy fa: “Myanmar dia vatosoa tena toerana iray any Azia atsimo atsinanana. Manantena ny hiara-hiasa amin'ny ekipa eo an-toerana aho eto, mandray anjara amin'ny fampandrosoana talenta; ary tafiditra ao anatin'ny fitomboana ankehitriny sy ho avy an'ny Hilton sy ireo mpiara-miasa aminay eto amin'ity firenena manaitra ity. ”
Ny traikefa nampiantranoan'i Veronique dia niainga tany amin'ny taniny, Belzika, tao amin'ny fizarana sakafo sy zava-pisotro ary efitrano. Ny asany dia nitondra azy manerana izao tontolo izao, avy any Eropa - toerana niorenany tany United Kingdom sy Alemana - ary nankany Azia izay niasany nanerana an'i Sina sy India. Talohan'ny nifindrany tany Myanmar dia nandany efa ho folo taona tany Thailand i Veronique. Mahay amin'ny fiteny efatra izy, ao anatin'izany ny Thai.
Fihaonambe iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany sy fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fizahantany
Tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt ny Fanahy Krismasy: